Simone Gbagbo oo dambiyo dagaal loo maxkamadaynayo - BBC Somali
Simone Gbagbo oo dambiyo dagaal loo maxkamadaynayo
Lahaanshaha sawirka SANOGOAFP
Image caption Simone Gbagbo
Marwadii koobaad ee madaxweynihii hore ee waddanka Ivory Coast, Simone Gbagbo, ayaa lagu wadaa in maanta loo maxkamadeeyo dambiyo ka dhan ah aadanaha - taasi oo noqonaysa maxkamadeyntii ugu horreysay ee nooceeda oo kale ah oo dalkaasi lagu qabto.
Simone Gbagbo, ayaa ku eedaysan tahay dambiyo dagaal oo la gaystay intii ay socdeen qalalaasihii xigay doorashadii 2010-kii dalkaasi ka dhacday, taasi oo ay ku dhinteen in ka badan 3,000 oo qof.
Simone Gbagbo ayaa shan sano ku jirtay xabsi ku yaala Ivory Coast, balse Laurent Gbagbo oo ah ninkeeda iyo madaxwaynihii hore ee dalkaasi oo isku dambi loo haysto ayaa bishii koobaad ee sanadkan dacwad kaga bilaabatay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee magaalada Hague.
Iyada waxaa lagu maxkamadaynayaa xarunta ganacsiga dalkaasi ee Abidjan inkasta oo laga rabo maxkamadda caalamiga ah ee ICC haddana dawladda Ivory Coast ayaa diiday in ay gudbiso waxayna sheegtay in ay maxakamadayn cadaalad ah ku heli karto dalkeeda.
Qolyaha xuquuqda aadanaha u dooda oo matalaya lahaysteyaasha ayaa diiday in ay ka qaybqaataan.
Waxay sheegeen in qareennada u doodaya aan la siinin ogolaanshaha waxkaste oo ay u baahnaayeen, sidaas daraaddeedna aysan difaaci Karin.
Maxkamadayntan ayaa noqonaysa midii labaad ee la soo taago Simon Gbogba.
Waxaa sanadkii hore lagu xukumay labaatan sano oo xabsi ah iyada oo loo loo haystay dambiyadii ay gashay intii uu dalkaasi ku jiray qalalaasaha.